Mahatratra 327 253 ny olona voa any Etazonia izay mitana ny lohalaharana hatrany amin’ny isan’ny voa, ary 9302 ny maty, 16 735 no sitrana. Raha any Eoropa dia lasa I Espagne ny lohalaharana amin’ny isan’ny voa mahatratra 130 959 ary faharoa amin’ny isan’ny maty be indrindra izay efa 12418 amin’izao fotoana izao, ary 38 080 no sitrana. 15 887 kosa ny maty any Italie izay lohalaharana hatrany amin’ny isan’ny maty, ary 128 948 ny olona voa, ary 15 887 no sitrana.
Voan’ny Coronavirus i Patrick Bruel
Tafiditra ao anaty lisitr’ireo olo-malaza voan’ny covid-19 ilay mpihira malaza Britanika Marianne Faithfull taorian’ilay mpiangaly jazz Ellis Marsalis ny alarobia teo. Isan’ireo voa ilay mpilalao sarimihetsika Amerikanina Tom Hanks sy ny vadiny, ilay mpilalao sarimihetsika sady mpihira Rita Wilson, izay efa nandresy ny aretina taorian’ny fitokana-monina tany Australie nandritra ny 14 andro ary efa nody any Los Angeles. Nanomboka ny alakamisy teo kosa no voamarina fa tratry ny Covid-19 ilay mpihira Malaza Frantsay Patrick Bruel, izay miezaka mampitony ireo namany sy mpankafy azy, fa tsy misy atahorana ny aminy na dia miaina an’ireo fambaran’ny covid-19 aza.
Nisy fihenana ny isan’ny maty
Tafiakatra 7560 kosa ny maty any Frantsa, ka 441 tao anatin’ny 24ora farany, raha toa ka 68605 no fitambaran’ireo voamarina fa voa voa. 525 kosa no isan’ny maty tao anatin’ny iray andro tany Italie, raha 681 ny sabotsy lasa teo. Ny an-dry zareo Espaniola dia 674 tao anatin’ny 24 ora izay fihenana fahatelo tao anatin’ny 3 andro nisesy. Azo ambara ho nisy fihenana izany ny taham-pahafatesana aloha tany Eoropa tato anatin’ny fotoana fohy.
594 tao anatin’ny 24 ora
no isan’ny maty tao anatin’ny iray andro tao anatin’ny fanjakan’I New York tao anatin’ny 24 ora, raha 630 ho an’I Etazonia manontolo. Tafiakatra 4159 no isan’ny maty tao New York hatramin’izay, ary ity tanàn-dehibe ity no ivon’ny coronavirus any Etazonia, izay efa 9302 izao no maty. Efa 327 000 mahery ny voa any Etazonia, ary efa nilaza ny Filoha Amerikanina fa mety ho ratsy noho izao ny zavatra hitranga ao anatin’ny roa herinandro.
Hiverina ny asa aman-draharaha sasany
Nidina hatrany nandritra ny 5 andro nisesy ny tahan’ny fahavoazana any Iran. Nanambara ny fitondram-panjakana any an-toerana fa hanomboka hiverina tsikelikely ny asa aman-draharaha manomboka ny 11 aprily, ho an’ireo sehatr’asa tsy dia ahiana ny risika amin’ny coronavirus, izay tsy hoterena hihiboka. Ny 19 febroary no nanomboka tafiditra tany an-toerana ny coronavirus, ary efa nisy fotoana I Iran no teo amin’ny laharana fahatelo be maty indrindra taorian’I Chine sy Italie, saingy somary voafehy ihany mitaha amin’ity farany. 151 no maty tao anatin’ny 24 ora, izay manome ny isa ho 3603 hatreto.
Gadra 5000 mahery havoaka
Nanao fanambarana ny Minisitry Fitsarana Maraokanina, fa nanaiky ny hamotsotra gadra miisa 5654 ny mpanjaka Mohamed VI. Natao io mba hanamafisana ny fiaroavana ireo gadra. Mason-tsivana hamin’ny fanafahana ny resaka taona, ny toe-pahasalama, ny faharetan’ny fotoana nitazonana am-ponja, ary ny fitondran-tenan’ireo gadra. Tsiahivina fa ny 1 aprily ry zareo Frantsay dia namoaka 6266 mba hisorohana ny mety ho fahatafidirana sy fihanaky ny covid-19 any am-ponja, ary mihena rahateo ny asam-pitsarana amin’izao. Ny eto Madagasikara kosa dia azo antoka fa ny mifanohitra amin’izany no miseho amin’ny resaka fanagadrana noho ny raharaha politika.
Nampiana 30 andro ny hamehana
Nohalavain’ny Filoha Sénégalais 30 andro ny Hamehana any an-toerana manerana ny tanin’ny Repoblika mba hisorohana ny fipariahan’ny valanaretina coronavirus. Ny 23 martsa no nanaovana fanambarana ny hamehana, ary izao notohizana izao. Miisa 207 ireo vomarina voa any 207 ireo voamarina fa voa any Sénégal ka 66 no efa sitrana, 1 no maty. Nanolotra volabe 40 000 Fcfa (70 000Euros) mba hiadiana amin’io moa ilay mpilalao kitra malaza Papiss Demba Cissé.
Marary 14 no sitrana
Mahatratra 147 ireo olona mitondra ny tsimokaretina Covid-19 atsy amin’ny nosy Mayotte, ka tranga vaovao ny 13 amin’ireo. Mpiasan’ny fahasalamana ny 32 amin’ireo voa. 14 tamin’ireo narary izao no efa sitrana soa aman-tsara. Nisy 2 anefa no namoy ny ainy, noho izy ireo tena narefo ara-pahasalamana.
Ahena 30% ny karaman’ireo mpilalao kitra matihanina…
Miantso ireo mpilalao kitra matihanina hampidina hatramin’ny 30 % ny karamany avy ireo klioba Anglisy. Ny ao anatin’ny “premier league” no voakasik’io mba ho fandraisana anjara amin’ny ady tsy hianahan’ny valanaretina Coronavirus, izay efa namoizana ain’olona manodidina ny 5000 any Angletera hatramin’izao.